Sabti 30 Bisha Koobaad 2021
Makhaayad Kushiinka Chuan II, oo qaada labadaba weelka dhoobo madow ee Sichuan Yingjing iyo alaabada qashinka ee laga soo qaaday dhismaha metrooga oo ah dhexdhexaad, waa makhaayad tijaabo ah oo lagu dhisay tijaabada casriga ah ee farshaxanka dhaqameed dhaqameed. Jabinta xuduuda qalabka iyo sahaminta qaabka casriga ah ee farshaxanka hiddaha iyo dhaqanka, Infinity Mind waxay soosaartay gogollada ka dib markii la toogto haashkii maroodiga madow ee Yingjing, oo ay u isticmaasho aaladda ugu weyn ee qurxinta Chuan's jikada II.
Jimco 29 Bisha Koobaad 2021
Kafateeriyada Ka jawaab celinta kooban ee casri, bilic nadiif ah, oo gudaha ah waxyooday miraayadaha miraha ka samaysan ee loo adeegsaday qaab aan macquul ahayn ayaa la sameeyay. Weelku waxa uu buuxiyaa meelaha bannaan, isaga oo abuuraya qaab gebi ahaanba u eg qaab farshaxan ahaan u eg god, laakiin haddana ah mid laga soo saaray qaabab joomatari fudud oo toosan. Natiijaduna waa khibrad nadiif ah oo la xakameeyo. Naqshadeynta xariifka ahi waxay sidoo kale sare u qaadeysaa xaddidaadda xaddidan adigoo u beddelaya waxyaabaha wax ku oolka ah qaababka qurxinta. Nalalka, armaajooyinka iyo shel shelver waxay gacan ka geystaan fikradda naqshadeynta iyo muuqaalka farshaxanka.
Khamiis 28 Bisha Koobaad 2021
Xafiiska Adeegga Fikradda mashruucu waa "in xafiiska lagu xidho magaalada" laga faa'ideysto deegaanka. Goobtu waxay ku taal meesha lagu wareysto magaalada. Si loo gaadho waxaa loo dajiyaa booska qaabkiisa tunnel ah, kaasoo ka gudba albaabka laga soo galo ilaa dhamaadka xafiiska xafiiska. Xariiqda alwaaxa saqafka iyo farqiga madoow ee lagu rakibay nalalka iyo qaababka qaboojiyaha ayaa adkeynaya jihada magaalada.
Arbaco 27 Bisha Koobaad 2021
Makhaayadda Waxa jira waxyaabo badan oo kuwan ka mid ah naqshadaha casriga ah ee suuqa maanta jooga Shiinaha, oo badanaa ku saleysan naqshadaha dhaqameed laakiin leh qalab casri ah ama muuqaallo cusub. Yuyuyu waa maqaayad Shiinees ah, naqshadeeye ayaa abuuray qaab cusub oo lagu muujiyo naqshadda Oriental, Rakibaad cusub oo ka kooban xariiqyo iyo dhibicyo, kuwaas ayaa laga dheereeyay albaabka ilaa gudaha maqaayadda. Isbeddelka wakhtiyada, qadarinta bilicsanaanta dadka ayaa waliba isbedelaya. Naqshadeynta Oriental ee casriga ah, hal-abuurnimada aad ayey muhiim ugu tahay.
Isniin 25 Bisha Koobaad 2021
Makhaayadda Iyada oo koritaanka tartiib tartiib ah ee suuxinta iyo isbeddelka bilicsan ee aadanaha, qaabka casriga ah ee muujiya nafta iyo shakhsiyadda ayaa noqday qodobbada muhiimka ah ee nashqadeynta. Kiiskani waa maqaayad, naqshadeeyuhu wuxuu doonayaa inuu abuuro waayo-aragnimo boos da 'yar oo loogu talagalay macaamiisha. Dhirta khafiifka ah, cagaarka iyo cagaarka waxay abuurayaan raaxo dabiici ah iyo qalalaase xagga bannaan. Mashiinka loo yaqaan 'chandelier' ee gacanta lagu sawiro iyo birta ayaa sharxaya isku dhaca u dhexeeya aadanaha iyo dabiiciga, taasoo muujineysa sida ay muhiim u tahay maqaayadda oo dhan.
Decor Rakibaadda Sawirku Isniin 1 Bisha Saddexaad
Only Right Here Haysta Mindida Axad 28 Bisha Labaad
180º North East Sheeko Sabti 27 Bisha Labaad
Makhaayad Kafateeriyada Xafiiska Adeegga Alwaaxyada Acoustic-Ka Ah Ee Dabacsan Makhaayadda Makhaayadda